Bodegas Navarro López - Senziwe eSpain
Kuthunyelwe ku-On 7 January, 2019 16 February, 2019 By HB
Emasangweni aseValdepeñas, eCiudad Real, yiBodegas Navarro López oneminyaka eyikhulu ubudala. Izalelwe njengebhizinisi lomndeni, ekupheleni kwe-80 lapho kuthengwa ngumongameli wamanje, enikeza kakhulu umgomo we-Winery nokubheja ngokuyinhloko ngekhwalithi kanye nokuphela. Amaphayona eNkambiso Yamanje Yesiqalo Valdepeñas, I-Bodegas Navarro López ugcina ukuzibophezela kwamanje ekunakekelweni kwemvelo kanye nasendleleni.
Ngokuthuthukiswa kweVinos de Castilla njengenhloso yalo, lo mshini wokugqoka ubelokhu uhlanganisa iwayini kusuka kwezinye izindawo nezinye izinhlobo. Kungenzeka ukuthola amawayini kusuka kuleli qembu lewayini elinalo Inkolo Yomsuka weRioja o I-Ribera del Duero.
I-Bodegas i-Navarro López ihlelwe ngokuyisisekelo eduze kwamahektha izivini.
Lokhu kufinyelela ukwelashwa okuhle kakhulu kwamagilebhisi, ukunciphisa isikhathi kusukela lapho kuvunwa kuze kube yilapho sekuqothulwa futhi kuphumula. Indawo yendawo lapho isivini esikhulu sikhula khona kungokwalabo INGABE u-Valdepeñas, okunikeza ama-nuances nama-aromas kumvini oveza ngokucacile ubuntu besifunda esiyingqayizivele sokulima kwalo. Ngaphezulu kwezinsuku ze-300 zokushisa kwelanga ngonyaka, noma ukulima umvini emhlabathini wobumba nokumbalwa okuvundile, kunika iphuzu elifanelekayo elivuthiwe, ngakho-ke ukuthola amawayini ahlelekile futhi ahle kakhulu.
Ikhwalithi yewayini laseDon Aurelio yalezi zinezimboni ivela ngaphandle, okuyisiginiso sekhwalithi ngenani elimangalisayo:
UDon Aurelio Rosado, DO Valdepeñas
Don Aurelio Rosado Iwayini eliphelele ukuhamba nezifundo zokuqala, imifino, irayisi, i-pasta, njll. I-pink ebomvu, iveza ama-strawberry fresh kanye nama-raspberry, aphelela ekugcineni komlomo omuhle futhi omnandi. Ukukhonza ekushiseni okungcono (i-8 - i-10 degrees) le vinini iphuma ngokusha futhi ikhwalithi yayo. A kumele ku amawayini e-rosé avela eSpain.
UDon Aurelio Tempranillo, DO Valdepeñas
Don Aurelio Tempranillo Ngokuqala koku iwayini elibomvu lomkhiqizo. Iphuma ngesakhiwo sayo esilula, esisivumela ukuba sinambithe wonke ama-aromas alawo aphethwe amagilebhisi adumile eCastilla La Mancha. I-nuances yezithelo ezibomvu ne-caramel esontekisiwe ibonakala. Ukubhanqa kunconywa kuzo zonke izinhlobo zenyama ebomvu, ama-stews kanye nama-cheeses.
UDon Aurelio Crianza, DO Valdepeñas
Don Aurelio Crianza ingenye yezinkanyezi zomkhiqizo. Iqokomisa ama-aromas agwetshiwe nama-caramel anika izinyanga ezingu-12 emiphongolweni yesi-French oak. Ama-aroma wezithelo ezibomvu ezivuthiwe, enhle futhi enombala obomvu obomvu. Ukukhetha okuphephile ukuhlanganisa nezinyama ezibomvu, pates nazo zonke izinhlobo izitsha ezinamandla.
UDon Aurelio Verdejo, DO Valdepeñas
Don Aurelio Verdejo yiyona iwayini elimhlophe lomkhiqizo. Ama-balsamic nama-nuances ezimbali eziqinisa ukunikeza ama-aromas ashisayo nezithelo ezimhlophe. Ukushisa kwalo okuhle kokusetshenziswa, phakathi kwe-6 ne-8 degrees, kwenza kube okuphelele ukuhamba nezinhlanzi, izinhlanzi zasolwandle, ilayisi kanye noshizi ezintsha. Kunikezwe iMidali Yegolide Elandelanayo ku-FERCAM. Wonke amandla we- I-Verdejo yamagilebhisi ne touch elegant of Castilla.
Ngaphandle kokungabaza i-Bodegas Navarro López iqhubeka ithuthuka unyaka nonyaka futhi kuhle ukuwaqaphela kakhulu.
Yabelana futhi usilandele kumanethiwekhi:
Tagged: I-Bodegas Navarro López/Iwayini kusuka kuValdepeñas/Iwayini elibomvu/Amawayini aseSpain
Post Previous: Hola
Post Next: Amawayini okuchitha isiphepho esiqhingini esiwugwadule noRichard Branson